Tsy misy afa-tsy fahasambarana !
"(Hoy Andriamanitra:) Sambatra izay olona mihaino ahy. " Ohabolana 8:34
"Ny mpanompoko hihoby noho ny faharavoam-po." Isaia 65:14
“Tsy misy afa-tsy fahasambarana”, izany no teny mamin’ireo mpanentana fandaharana iray mahasarika mpijery an-tapitrisany ao amin’ny fahitalavitra, ka averimberiny matetika. Saingy tena hafa mihitsy ny zava-misy. Rehefa nifarana ny fandaharana ka nanontaniana ireo olo-malaza nasaina handray anjara, dia nilaza fa zavatra maloka sy mangidy no hitany. Ho an’ny iray dia tsy nisy afa-tsy fanararaotana ny fahatsorany no natao, ho an’ny hafa kosa dia fihatsarambelatsihy sy fitaka ihany no teo. Lavitra dia lavitra ny fahasambarana!
Tsy maintsy miaiky isika fa izao tontolo izao dia tsy manolotra afa-tsy fahasambarana tsy araka ny filaza azy, amboamboarina, mamitaka; ary ny fotoana mahafinaritra mihelina atolony dia hosoka sy fandrebirebena ihany.
Hatramin’ny nidiran’ny ota teto amin’izao tontolo izao (Romana 5:12), dia tsy nanana ny tena fahasambarana ny olona miaina tsy misy an’Andriamanitra. Rehefa mihevitra izy fa tojo izany, dia tsy inona izany fa fahatsapana mandalo sy miserana ary tsy maharitra mihitsy. Hoy ny Baiboly manoritra mazava: “Eny, na dia tratra arivo taona indroa aza izy”, dia tsy hahita fahasambarana (Mpitoriteny 6:6).
Ny fanatonana an’Andriamanitra irery ihany no mampisy ny tena fahasambarana. Jesosy Kristy, Ilay Mpamonjy, dia namoy ny fiainany lavorary sy marina noho ny fitiavany antsika, mba hanavotany antsika amin’ny fahafatesana mandrakizay sy hahatonga antsika ho vita fihavanana amin’Andriamanitra. Mihoatra noho izay takatry ny saina ny fitiavana toy izany, kanefa manome fiadanana sy fifaliana ho an’ny fo (Galatiana 5:22). Ny Baiboly dia manasa antsika hanatona an’Andriamanitra mba hahafantatra ny fiadanany sy ny tena fahasambarana, maharitra mandrakizay, azontsika noho ny fitiavan’i Jesosy.